Akụrụngwa China Maka UPVC n'ime windo mepere emepe mepere na ụlọ nrụpụta | Yuqiang
Window & Ọnụ ụzọ
Ohere & Mgbachi Mgbachi
Mkpọchi ọnụ ụzọ
Esemokwu esemokwu maka Windows Aluminom
Mgbachi mgbachi Maka windo UPVC
Akụkụ Maka Windows & Ọnụ ụzọ Aluminom
Akụkụ Maka UPVC Windows & Door
Akụrụngwa Maka Windows & Ọnụ ụzọ Aluminom
Akụrụngwa maka UPVC Windows & Door
Ọnụ ụzọ eletriki nwere ọgụgụ isi na windo
Okwu nrụtụ aka
Silt na Tụgharịa Window System
Ọnụ ụzọ eletrik nwere ọgụgụ isi & windo
Akụrụngwa maka sistemu windo UPVC Tilt & Turn
Akụrụngwa Maka sistemụ windo mepere emepe UPVC n'ime
Akụrụngwa maka sistemụ windo tụgharịa & tilt
Aluminium alloy n'ime casement window usoro ngwaike ...
Akụrụngwa maka sistemụ windo mepere emepe UPVC bụ ezigbo usoro sistemụ windo UPVC maka UPVC
Windows, Akụrụngwa maka sistemụ windo mepere emepe UPVC dabara maka windo UPVC nwere ụdị euro.
Akụrụngwa maka sistemụ windo mepere emepe nke UPVC dabara adaba maka obosara obosara FFB: 400mm-750mm na ịdị elu FFH: 400mm-1600mm, Oke a tụrụ aro ka obosara na ịdị elu 1.5: 1, max kacha ebugo ≦ 60kg, ọkwa na-ebu ibu na-adabere na mgbabere uzo. Ị nwere ike na -ezo aka parameters mgbachi.
Ibu arọ nke onye ofufe (ngụkọta ngwongwo dị ka iko na ihe ndị yiri fan) *1.4 (ihe nchekwa) pere mpe ma ọ bụ ha nhata oke ibu nke mgbakwunye.
Ọnụahịa FOB: 4.44USD/Ntọala
Tụkwasịnụ Ikike: 1,500,000 Ibe kwa ọnwa
Nkọwa na Mpempe data
1. Akụrụngwa maka sistemụ windo mepere emepe nke UPVC dabara maka windo UPVC nwere oghere euro.
2. Kwesịrị ekwesị maka sash obosara FFB: 400MM-750MM na ịdị elu FFH: 400mm-1600mm, Nha tụrụ aro ka obosara na ịdị elu 1.5: 1.
3. Ibu oke ≦ 60kg, ọkwa na-ebu ibu dabere na mgbanye. Ị nwere ike na -ezo aka parameters mgbachi. Ibu onwe onye nke onye ofufe (ngụkọta ngwongwo dị ka iko na ihe ndị nwere ụdị ofufe) *1.4 (ihe nchekwa) erughị ma ọ bụ hara nhata oke ibu nke mgbakwunye
Akụrụngwa maka sistemụ windo mepere emepe nke UPVC
Usoro nke. Aha akụkụ Nkebi No. Ee e. Nkọwapụta Ihe mkpọchi Nkwupụta
1 Mgbakwunye Elu (N'aka ekpe) SPK-0110013/0110198-1 1 L 9mm
Oke mgbachi (aka nri) SPK-0110014/0110199-1 1 R 9mm
2 Onye nlekọta
3 Nnyefe Gear (7.5mm)
4 Mgbaaka ala (n'aka ekpe) SPK-0110013/0110198-4 1 L 9mm
Mgbabere Mgbasa (N'aka nri) SPK-0110014/0110199-4 1 R 9mm
5 Middle mgbabere SPK-0110016/01100155 1 Nhọrọ
6 Esemokwu Nọrọ SPK-0260003-6 1 8 '~ 16 "
7 Ijikwa SPK-0110027-7 1
7A Ijikwa SPK-0270001-7A 1
E nwere ụdị aka dị iche iche ịhọrọ site na: Mkpịsị aka mkpịsị aka, ọkọlọtọ atọ, ogwe oche oche, aka na igodo
Ihe nrụnye ngwaike maka windo aluminom tụgharịa & tilt
Usoro nwụnye ngwaike
Wụnye dị ka eserese 1, eserese 2, eserese 3 ... otu otu ka ịwụnye
Ọ bụghị egwu ịtụle na nkọwa
Ngwa dị iche iche dị iji gboo mkpa gị dị iche iche, siri ike ma dịgide ogologo oge.
Jiri akụrụngwa nnwale iji nwalee ngwaahịa, akwa site na nyocha oyi akwa, njikwa njikwa.
Nkwado Maka Nhazi
Enwere ike ịhazi ya maka eserese na nlele, anyị na -enye gị ezigbo azịza.
Onye Ahịa Ike
Jiri akụrụngwa nnwale iji nwalee ngwaahịa, akwa site na akwa, nyocha, ogo njikwa.
Ị ka na -echegbu onwe gị maka nsogbu ndị a?
Ị ka na -agbaga n'ụlọ ahịa akụrụngwa?
Na -echegbu onwe gị maka enweghị ike ịzụta nkọwapụta ahụ, buru oke ibu ibu.
Ị ka na -azụ ahịa maka ngwa? Ị maghị etu ị ga -ahọrọ nha, ọrụ aka ya adịghị mma, ị maghị
Gịnị mere ị ji ahọrọ anyị
Aha ngwaahịa: Akụrụngwa maka sistemụ windo mepere emepe UPVC
Nkọwa ngwaahịa: aka (ọkọlọtọ ọkọlọtọ, aka oche oche)
UPVC Nnyefe Gear: 400# 600# 800# 1000# 1200#
UPVC Hinge: N'aka ekpe, aka nri
Friciton nọrọ (njikọ abụọ, ọnụnọ esemokwu esemokwu na Europe)
Njirimara ngwaahịa: ibu 90kg na-ebu ibu, aka ekpe na aka nri na-agbanwe, nrụnye ngwa ngwa, nnyefe dị larịị, enweghị mkpọtụ.
Ngwaahịa: Carbon Steel, zinc alloy
Ogo ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya
Ahụmahụ afọ 20
prefessional bụ ihe ịga nke ọma gị
Onye nrụpụta ụlọ ọrụ na -enye ngwaahịa a,
nke nwere ike ịchekwa njikọ dị n'etiti, ma nye ndị na -azụ ahịa uru kachasị.
1. A na-eji akụrụngwa zinc anọ mee otu ihe eji eme ihe, na usoro ihe dị elu (± 50 ℃) anaghị emebi ma ọ bụ mebie.
2. Akụkụ igwe anaghị agba nchara niile bụ ihe 304, nke nwere nickel 7.5-8.5, nke anaghị agba nchara.
3. Akụkụ plastik dị na sistemu dabara adaba bụ ihe nylon PA66 na-eguzogide ike dị elu, nke agaghị emebi emebi.
4. A na-eji ihe polyurethane fesa akụkụ ahụ ịgba, ọkpụrụkpụ bụ 45μm-100μm, na nrapado akọrọ karịrị akara iri, ihe niile karịrị ọkwa mba.
5. Ngwa nrụpụta maka igwe zinc na aluminom na-anwụ anwụ bụ 120Ton, na igwe ọkpọ ọkpọ akpaka bụ 180Ton, nke na-ahụ ike, ike na ike nke mgbatị ahụ. Imeghe ime, windo, windo windo ime ụlọ mepere ma mechie oge 450,000 nke usoro mmeghe na mmechi, enweghị mgbagọ nke akụkụ, iji ya eme ihe.
6. Nlekọta elu nke akụkụ plated bụ usoro electroplating chromium trivalent, ọkpụrụkpụ nke akwa mkpuchi bụ 45μm-100μm, na nnwale nnwale nnu bụ awa 120 na-enweghị pinholes, bulging na nchara.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke nyocha ugboro ugboro na ịchepụta ule mmeghe ebu, Yuqiang Hardware emeela nke ọma ihe mkpuchi windo aluminom alloy, njikọ ya, na ime ime ya na agbụ agbịgharị agbagọ site na ihe mbụ alumini alloy extrusion na carbon steel. Akụkụ stampụ na-ahụ na ikike ibu nke ngwa dị elu. Ihe nkedo aluminom mbụ nwere ike ibu 70kg, na mgbakwunye nchara carbon nwere ike iburu 180kg na -enweghị nkwarụ ma ọ bụ mgbaji ọkpụkpụ.
Ọ edozila nsogbu na-ebu ibu nke nnukwu nnukwu windo na windo nwere glazed atọ. Ugbu a, ekwuputala ngwaahịa a patent mba, na -eduga ụdị ụlọ ndị ọzọ.
Nke gara aga: Akụrụngwa maka sistemụ windo tụgharịa & tilt
Osote: Akụrụngwa maka sistemu windo UPVC Tilt & Turn
Ajụjụ: Gịnị kpatara ị ga -eji họrọ YuQiang karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ?
A: Anyị na -arụpụta ngwaahịa anyị na mpaghara. Ọrụ ndị ahịa anyị bụ ihe pụrụ iche na ahaziri iche maka ndị ahịa ọ bụla. YuQiang ọ bụla Ngwaahịa a bụ ihe eji achọ mma ma na-adigide yana akwụkwọ ikike maka ọnwa 12. Anyị na -eji akụrụngwa dị elu sitere na nke kacha mma na China. Ndị otu anyị na -arụkọ ọrụ na ndị ahịa maka iwu omenala ọ bụla.
Ajụjụ: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ anyị nwere ike ịnabata?
A: Dịka anyị nwere ike rụọ ọrụ na usoro T/T ma ọ bụ L/C, mgbe ụfọdụ okwu DP.
1). na okwu T/T, a chọrọ ịkwụ ụgwọ 30% na 70% itule tupu ebufe.
2). Na okwu L/C, L/C 100% anaghị agbanwe agbanwe
Ajụjụ: Kedu ụzọ lọjistik maka nnyefe ngwaahịa?
A: 1) .90% na mbupu n'oké osimiri, gaa na kọntinent niile dịka South America, Middle East, Africa, Oceania na Europe, wdg.
2). Maka mba ndị agbata obi China, gụnyere Russia, Mongolia, Uzbekistan wdg, anyị nwere ike jiri ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè na -ebufe.
3). Maka akụkụ ọkụ dị mkpa ngwa ngwa, anyị nwere ike ịnapụta ọrụ ozi mba ofesi, gụnyere DHL, TNT, UPS ma ọ bụ FedEx.
Ajụjụ: Gịnị bụ usoro akwụkwọ ikike gị?
A: Anyị na-enye akwụkwọ ikike ọnwa iri na abụọ na ngwaahịa anyị niile, ewezuga ọdịda nke nrụnye na-ekwesịghị, arụmọrụ ma ọ bụ mmezi, ihe ọghọm, mmebi, iji ihe eme ihe ma ọ bụ na-abụghị YuQiang mmegharị na ịcha mma.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge ndu gị?
A: Anyị na -achọ inye ndị ahịa oge ndu ngwa ngwa. Anyị ghọtara na ihe mberede na -eme na ekwesịrị ka imepụta mmepụta dị mkpa na ntụgharị ngwa ngwa. Oge idenye n'usoro ngwaahịa bụ ụbọchị ọrụ 3-5, ebe iwu omenala n'ime izu 1-2. Kpọtụrụ YuQiang ngwaahịa ka anyị nwee ike nye oge ụzọ ndu ziri ezi dabere na ọnọdụ.
Akụrụngwa ihe owuwu
Ngwaike Ohere windo
Akụkụ akụrụngwa ngwaike windo
Okwuchi windo Parts Hardware
Akụrụngwa Ohere Mgbidi
Akụkụ akụrụngwa akụrụngwa Windows
Ngwa & Ngwa akụrụngwa ihe eji eme ụlọ
Ngwa Ngwa Fittings Ngwa
UPVC windo windo windo windo sistemụ ngwaike
Window UPVC mepere emepe na windo nke nọ n'elu ...
UPVC windo dị n'ime windo windo sistemụ ngwaike
UPVC window ọkụ na-eguzogide ime casement windo ...
Kpọtụrụ anyị taa maka ndụmọdụ imewe.
Zaghachi gị n'ime awa 24
Ohere & Nhazi Ọnụ ụzọ
Soro Anyị Na
Etu ị ga -esi chọta anyị
Okwu:Houdongcheng Industrial Park, Jimo District, Qingdao, PRC
Anyị na-emeghe: Mn-Fr: 8:30 am-6:00 pm